Stadia, ikpo okwu ntanetị ọhụrụ nke Google, bịarutere | Akụkọ akụrụngwa
Stadia, ikpo okwu ntanetị ọhụrụ nke Google, bịarutere
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ihe omume, General, Ihe ngosi
Anyị nọ na-akpọsa ya, ọ bụ naanị oge tupu onye dike nwere isi obodo G nwere mmasị na egwuregwu vidio. Dịkwa ka ịkọ nkọ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, oge ahụ abịa. Ọ bụ, usoro ohuru ohuru maka "ndi egwuregwu" nke Google jiri banye n'ime uwa nile nke egwuregwu vidio bụrịrị eziokwu. Ma ka mma ma ọ bụ ka njọ, ahapụbeghị onye ọ bụla na-enweghị mmasị.
Finalmente Anyị agaghị enwe njikwa Google. Maka ọtụtụ ndị ọ bụ mmechuihu ebe ọ bụ na ha chọrọ ịhụ ihe Google nwere ike ịmepụta ma na-enye aka na ụlọ ọrụ a. Ma n'aka nke ọzọ, echiche nke inwe ike igwu egwuregwu gị niile, na ihuenyo ọ bụla na n'oge ọ bụla, dọtakwara uche ma nwee mmasị dị ukwuu. Anyị maara na Google agaghị akpọ anyị maka ngosipụta na ihe ụwa, ma ọ nwere.
1 Stadia abụghị ihe njikwa ... mana ọ masịrị anyị
2 Kekọrịta egwuregwu gị na onye ọ bụla ịchọrọ n'oge ahụ
3 Enweghị ngwaọrụ Stadia
4 Ihe anyị amabeghị banyere Stadia
Stadia abụghị ihe njikwa ... mana ọ masịrị anyị
N'ịmara ikike Google nwere na ọkwa mmepe, anyị tụrụ anya ihe dị mkpa. Ruo izu ole na ole ekwuola na mgbasa ozi dị iche iche na ihe ọ ga-abịa gosi anyị ga-abụ ihe yiri ya a Netflix nke egwuregwu. Ma nke a bụ ihe na ọ pụtabeghịEnwebeghị okwu banyere ndenye aha ma ọ bụ ọnụahịa edo maka egwuregwu. Ya mere, anyị enweghị ike ikwu hoo haa ụdị ọrụ anyị ga-atụkwasị obi.
Ihe Google gbalịrị iziga anyị echiche doro anya. N'ọdịnihu, dị nso, anyị agaghị achọ njikwa igwu egwuregwu kacha amasị anyị. Anyị nwere ike ịgbaso egwuregwu anyị na-amalite na laptọọpụ na TV anyị. Na mgbe anyị na-apụ, soro otu egwuregwu ahụ maka otu oge ahụ anyị nọ na ama. Ọnọdụ abụọ ahụ dị ka ezigbo ọganihu, anyị hụkwara nke a n'anya. Ma na ọtụtụ nkọwa iji kọwaa n'oge.
Ihe ọhụrụ ọzọ na-ekwu banyere egwuregwu nke Stadia ga-enye bụ enwere ike ịnweta ihuenyo. Ohere nke dabere na egwuregwu ahụ, ruo ugbu a ọ dị ka mgbagwoju anya. Enweghi ike ịchọta ike a chọrọ iji nye nhọrọ a, n'agbanyeghị na ọ dị ka Stadia ga-ewepụ ihe mgbochi ndị a n'oge na-adịghị anya, ndị egwuregwu ga-anabata ya.
Google chọrọ inweta ihe kachasị mma n'ụwa nke egwuregwu vidio. O nwekwala ụlọ ọrụ ndị akara aka na ngalaba a. Ma yana onyinye nke obere ụlọ ọrụ na ụwa nke egwuregwu nwere ike inye. N'ihi ya, Google na enye ndi akuko ozi oma nile n'ime ụlọ ọrụ niile rụkọtara ọrụ na okike Stadia. N'ụzọ dị otú a, a na-achọpụta na, yana ikike niile nke nnukwu G, ha na-akụ nzọ na ịmepụta ọdịnaya maka ikpo okwu ọhụrụ a.
Kekọrịta egwuregwu gị na onye ọ bụla ịchọrọ n'oge ahụ
Otu n’ime ihe ndị egwuregwu na-amasịkarị bụ nwee ike ịkekọrịta egwuregwu gị na ndị ọzọ. Ngwakọta nke ndị egwuregwu ndị ọzọ na egwuregwu anyị ga-eme na akpaghị aka. Dị ka anyị hụrụ na vidiyo ngosipụta ọ ga-abụ ọtụtụ mfe site na ntinye aka raara onwe ya nye maka ya. Inwe ike ịkpọ ndị egwuregwu ndị ọzọ oku n'egwuregwu anyị ga-abụ nke amamịghe na ngwa ngwa. Karịsịa ihe niile anyị nwere ike ime ya site na ikpo okwu n'onwe ya na enweghị mkpa ịkwụsị egwuregwu anyị.
Inwe nhọrọ dika nke a nke ịgbakwunye ndị egwuregwu na egwuregwu na ijiji nwere ike ịkatọ mmadụ ole na ole, Google dịkwa n'etiti ha. A mara ọkwa ya n'oge ngosi nke ụnyaahụ na Stadia ga-egosipụta ụfọdụ ntuziaka a kapịrị ọnụ maka egwuregwu ọ bụla. Ihe banyere ihe ekwuru na izu ndị na-adịbeghị anya. Mana ihe anyị na-enweghị bụ mwekota nke ndu n'onwe ya na egwuregwu. Nke ahụ ga-enyere anyị aka inye «Ngwọta» na kpọmkwem oge nke anyị na-amalite. Ọganihu ọzọ anyị hụrụ n'anya.
Stadia, ọbụlagodi ugbu a, abụghị ihe ọzọ a ikpo okwu maka egwuregwu na oké echiche akụkụ banyere nke enwere ọtụtụ ihe a ga-akọwapụta. Ihe ikpo okwu, ee, nke nwere oke dika Google. Nakwa na ọ dabere na ebe data data Google nwere na ụwa anyị. N’abụghị n’efu, otu n’ime mkpọsa o kwughachiri emezu taa "Ebe data ahụ bụ ebe ikpo okwu gị".
Enweghị ngwaọrụ Stadia
Dị ka anyị kwuru na mbido, ịmara na Google mechara zọọ na ịmepụta ihe nkwekọrịta anụ ahụ na-akụda ụfọdụ. Ma echiche ha na-enye achọghị ngwaọrụ ọzọ bụkwa ọganihu. Ndị na-egwu egwuregwu na ndị ọrụ nke teknụzụ ndị ọzọ na-eji opekata mpe abụọ, atọ na ngwaọrụ anọ kwa ụbọchị. Ma ọ dịkarịa ala, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, anyị na-eji ama kwa ụbọchị. Na nke a anyị na-agbakwunye, ikekwe, ụfọdụ ekweisi. Mgbe ahụ laptọọpụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu, yana njikwa ahụ.
Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike iwepu otu ihe dị mkpa iji mee ka ahụmịhe egwuregwu na-akwụghachi ụgwọ zuru oke, onye njikwa ahụ. Na Njikwa Stadia, nke ihe oyiyi dị na ya, anyị masịrị ya. Na a nhazi omenala na-ezochi teknụzụ ọhụụ dịka bọtịnụ iji kesaa egwuregwu anyị ozugbo na Youtube, ma ọ bụ otu olu olu. Ọ ga-eme odori site na USB Type C, njikọta WiFi, ọdụ ụgbọ mmiri jaketị isi atọ ntọala agba.
Anyị na-ahụ otú "Wepu" ngwaọrụ na-enweghị adịkwa ọzọ, na gameplay abụghị n'ezie ihe ọhụrụ. Inwe ike igwu egwuregwu otu egwuregwu ruo ugbu a, na ọtụtụ ndị ọzọ, na-enweghị mkpa njikwa ahụ. Ma ọ bụ telivishọn ebe anyị jikọtara ya mgbe niile na-eme ka agagharị na-ebuwanye ibu. Na na dị ka anyị kwurula, anyị nwere ike ime ya na-enweghị ida egwuregwu na ịgbaso otu isi ihe na-eme ka ọ ka mma. Enweghị igbe, enweghị nbudata, enweghị oke.
Anyị na-achọ mgbe niile ịhụ ọganihu. O doro anya na Stadia ga-abụ tupu na mgbe ọ gachara na nnukwu ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo. Ọganihu nke dịka ọ ga-adị mma maka ndị ọrụ. Na nke ahụ anyị na-eche que eje ozi nke mere na ndị kacha zọọ aka dị ka Microsoft ma ọ bụ Sony na-arịba ama nke ndozi ahụ ma gbalịa imeri ha. O doro anya na ụlọ ọrụ na-agbanwe anyị ga-ahụ ma ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịgbaso Google na ọkwa ọhụrụ a.
Ihe anyị amabeghị banyere Stadia
Mgbe ihe ngosi dị ụtọ na nke dị egwu, ọtụtụ ajụjụ na-adị na pipeline. Anyị na-anọnyere ọtụtụ ajụjụ dị ezigbo mkpa. Google debere anyị ịmatakwu banyere katalọgụ nke egwuregwu nke Stadia ga-enwe n'oge ọkọchị. Mana enwere ọtụtụ ihe nke agwabeghị anyị, na etiti ha ọtụtụ n’ime nnukwu mkpa. Otu n'ime nnukwu obi abụọ n'ime izu ndị a, nke ahụ ga-anọgide na-adị na mbara igwe, bụ ọrụ ọkwa azụmahịa nke Stadia.
Ọ ga-arụ ọrụ na ndebanye aha kwa ọnwa? Anyị amaghị ma anyị ga-enwe ike iji Stadia kwụọ ụgwọ ego kwa ọnwa. Ma n'ezie, anyị amaghị, ọ bụrụ otu a, ole anyị ga-ekwu maka ya. Nke a edobeghị anya. Nhọrọ ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụghị ọrụ ndenye aha, nwere ike ịbụ ịzụta egwuregwu ahụ, ma ọ bụ enwere ike ịnwe ụdị "mgbazinye" nke egwuregwu ọ bụla. Anyị ga-aga n'ihu ịkọ nkọ ruo mgbe Google kọwara anyị ọtụtụ ihe karịa.
Isi ihe dị oke mkpa, anyị amaghị obere opekempe maka ọsọ ọsọ na anyị ga-enwe ike iji Stadia. Karịsịa na-echebara mkpebi ndị a tụlere echiche na ngosi nke 4K HDR na 60 FPS. Ihe dị oke mkpa maka, na-echebara njikọ anyị nwere, iji mara ma anyị nwere ike igwu site na ikpo okwu Google ọhụrụ.
Na n'ezie, maka ndị niile na-egwu egwuregwu ụwa, ọ bụ ọ dị mkpa ịmata katalọgụ egwuregwu nke anyị ji gụọ. N'echiche a, Google na-ehota anyị n'oge ọkọchị. Yabụ, anyị ka ga-eche ọtụtụ ọnwa iji chọpụta nke a amaghi ama na ọtụtụ ndị ọzọ hapụrụ ikuku ebe ụnyaahụ. Tinggba chaa chaa n'elu ikpo okwu nke a ka nwere ọtụtụ ihe ịmara, ma dị oke mkpa, yiri ihe egwu. Ọ bụ ezie na anyị nwere mmasị n'echiche anyị gosipụtara na ndozi na-ọkpụrụkpụ na larịị nke egwuregwu na technology anyị nọgide na-eche ịmụtakwu banyere Stadia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Stadia, ikpo okwu ntanetị ọhụrụ nke Google, bịarutere
Kachasị Koogeek Home Ngwaahịa na ọrịre na Amazon
A na-akpọ iPads ọhụrụ nke Apple maka 2019: iPad Ikuku na iPad Obere